Hotels nke Trinidad na Tobago erite uru site na enyemaka gọọmentị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Hotels nke Trinidad na Tobago erite uru site na enyemaka gọọmentị
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ gbasara Trinidad na Tobago • Akụkọ dị iche iche
Idlọ nkwari akụ Trinidad na Tobago
The Trinidad na Tobago Gọọmentị na-enye ndepe $ 50 maka ndị nwe ụlọ na Tobago iji nyere aka na nwelite na nrụzigharị nke ngwongwo ha dị iche iche na nkwadebe maka imeghe mmeghe nke ụlọ oriri na nkwari akụ ha. Ọrịa ọrịa CroID-19 ọrịa ịba ọcha n'anya.
Ekwuputara ọkwa a dịka akụkụ nke Nkwupụta zuru oke banyere Mmetụta Mmetụta na Mmeghachi Ego na COVID-19 Ọrịa site na Mịnịsta nke Ego, bụ Honorrable Colm Imbert, na nzuko omeiwu taa.
Minista na-ahụ maka njem nlegharị anya, bụ Honorable Randall Mitchell, so na ndị ozi ndị ọzọ zutere ndị nwe ụlọ nkwari akụ na ebe obibi na agwaetiti nwanne Tobago na Machị iji kwenye na enyemaka a na-enye.
Mịnịsta Mitchell kwuru na mpaghara ndị njem na-eso ndị nje a na-emetụta n'ụzọ dị njọ. O kwuru na enyemaka ndị gọọmentị na-enye ga-ahụ na ụlọ oriri na nkwari akụ ahụ dị njikere maka ndị ọbịa a tụrụ anya bụ ndị ga-alọghachite ọrịa ọrịa COVID-19 coronavirus.
Mịnịsta Ala Dr. Keith Rowley kwuru na ihe ịga nke ọma mba ahụ nwetara bụ mgbe gọọmentị mechara tinye usoro ndị ọzọ n'oge gụnyere imechi ókèala obodo na ụlọ akwụkwọ mba ahụ. Na mgbakwunye, agbasoro usoro iwu ịdị ọcha nke World Health Organisation (WHO) nke gụnyere nhapụ mmekọrịta ọha na eze na-agba ume mgbe niile ma a ga-aga n'ihu na usoro ndị a. N'ime izu abụọ gara aga, ọ bụ naanị ọhụụ abụọ ka enwere ọhụụ mana mana ọnụ ọgụgụ ka elu nke ndị mmadụ ka ahapụchara n'ụlọ ọgwụ.
Trinidad na Tobago Ministry of Tourism na-eje ozi dị ka ihe mkpali iji nyere aka mee ka Trinidad na Tobago bụrụ ebe ndị njem nleta mbụ. Iwu na itinye aka n'usoro bụ ngwa ọrụ ya. Ngwaọrụ ndị ọzọ, ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka ihe pụtara ìhè dị oke mkpa, dị ka ịme nyocha, nyocha na nyocha usoro, yana ịmekọrịta ndị ọrụ ụlọ ọrụ. Ozi ahụ na-enye aka iwulite mmata nke ụlọ ọrụ ndị njem na ngalaba ndị mejuputara nke a bụ ndị njem na njem nleta na njem ngwaahịa.